မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: Ethnics
source : http://pwintthitsa.blogspot.com/
အခုတွေ့ရတဲ့ အလံကတော့ ကရင့်အလံဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၇ နှစ်မှာ ကရင့်အမျိုးသားသီချင်းနဲ့
အတူ မြန်မာပြည် ပါလီမန်ကနေပြီး အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း တွေကိုလည်း နောင်အခန့်သင့်တဲ့အခါ ကြိုးစားဖေါ်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါ
ကရင်လူမျိုးတွေဟာ လက်ရှိမြန်မာပြည်ထဲကို BC ၇ ရာစုနဲ့ ရှေ့ပိုင်းလောက်ကတည်းက ဝင်
ရောက်နေထိုင်လာခဲ့ကြရာမှာ ယနေ့ ကရင်ပြည်နယ်လို့ သိရှိကြတဲ့နယ်မြေတွေထက် ကျယ်ကျယ်
ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စနစ်တကျ
ကွယ်ပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခံထားရတာတွေကြောင့် အစစအရာရာ တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်
တာတွေကို အခြား မြန်မာပြည်သူတွေထက် ပိုမိုခံစားနေကြရပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း ပြည်ထောင်နယ်ပယ်တွေရှိခဲ့ဖူးရာမှာ ယနေ့ခေတ်မှာ
ကရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ သိရှိနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး သိပ်မရှိကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကိုက ကိုယ်နေတဲ့
မြို့အကြောင်းနဲ့ ကရင်နာမည်တွေရဲ့ဇစ်မြစ်ကို သိခွင့်မရခဲ့တာ ကိုယ်တွေ့ပါ။
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ လက်လှမ်းမှီသမျှ စုစည်းပြီး ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ။ လာရောက်ဖတ်ရှုသူများ မသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတကလေးတွေ ရယူသွားနိုင်ကြသလို မပြည့်စုံသေးတာ
တွေကိုလည်း အကြံပြု ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြပါတယ်။
source : Saw Ba Thet
۞ ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ ယက်လုပ်ပုံလေး၊
- မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ရိုးရာအသုံးအဆောင်အချို့၊
- ၁၉၁၇ ခုနှစ်က ကရင် စစ်ရဲအချို့၊
(ဒီကနေ့ ကရင်အချို့ရဲ့ ဘဝ)
ဒီမှာ ဖေါ်ပြထားတာထက် ဆိုးရွားတာတွေကိုတော့ သောသီးခို ဘလော့ မှာ slide-show တွေအဖြစ်နဲ့ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် ။ အနိဋ္ဌာရုံ မမြင်လိုသူများအတွက်တော့ မသင့်တော်ဘူးလို့ အကြံပေးလိုပါတယ် ။
- ကောက်သစ်ပေါ်ဦး ကရင်နှစ်သစ်ကူး (နှင်းပန်းအိမ်)
- The Karen People of Burma (Harry Ignatius Marshall, 2008) - ကရင့်အကြောင်း စုစည်းမှု ၊
- Burma and The Karen (Dr. San C. Po, 1928) - အင်္ဂလိပ်ခေတ် ကရင့်များအကြောင်း ၊
- ကရင်လူမျိုးနှင့် ကရင့်နိုင်ငံတော်သီချင်း
- အခြေခံ ကရင်သင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာ
- ကရင်လူမျိုးတို့ သိသင့်သိထိုက်သော လဆန်းလဆုတ် အခေါ်အဝေါ်များ
- ပိုးကရင်ဘာသာဖြင့် ဘုရားရှိခိုးကြပါစို့
- ပိုးကရင်-ဗမာ အဘိဓါန်
- ဗမာ-ပိုးကရင် အဘိဓါန် (ပ)
- ဗမာ-ပိုးကရင် အဘိဓါန် (ဒု)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၁) - by စသန်းမြင့် / မင်းစိုးစံ / ဖူ့တာမိက်
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၂)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၃)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၄)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၅)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၆)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၇)
- ပိုးကရင်စာ သင်ကြပါစို့ အပိုင်း (၈)
သဇင် October 2, 2010 at 12:05 AM
ကရင်အလံကတော့ ဘယ်တော့မှ အပြောင်းအလဲ မရှိဘူးဆိုတာ သတိ ထားမိပါတယ်။ ပြောင်းလဲစရာလဲ လိုမှ မလိုတာနော့။ ကြည့်လေ ကြည့်လေ ကြည့် မ၀လေပါဘဲ။ ကိုယ့်အမျိုးသား အလံဖြစ်လို့ မြှောက်ပြောတာ မဟုတ် ပါဘူး။ ကျမကတော့ ရန်ကုန်က စကောကရင်တယောက်ပါ။ ကရင်ဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည် ကိုမရောက်ဘူးလို့ ရောက်ဖူးအောင်တော့သွားမယ်ဆိုပြီး စီမံကိန်း ဆွဲထားတဲ့ သူတယောက်ပါ။ အခုလိုတိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့တော့ ဒီတသက်ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျမက ဒုံးကလဲ အရမ်းဝါသနာပါတယ်။ နှစ်တိုင်းလဲ ကတယ်။ ဖားအံက ဆရာစောမြင့်သူလာသင်ပေးတာ။
မန်းကိုကို October 3, 2010 at 3:46 PM
လာလည်တာ ဝမ်းသာသလို ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုင်ထိန်းသိမ်းချင်သူ တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ဖူးမှ ကရင်ပီသတာ မဟုတ်တော့ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီးမှ တစ်ချိန်မှာ ရောက်ဖူး သွားလာလေ့လာဖူးဖို့ လုပ်နိုင်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ အချို့အရာတွေမှာလည်း ကိုယ်မျှော်လင့်သလို အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘားအံက ဆရာစောမြင့်သူကိုတော့ လူနဲ့နာမည် သိပ်မတွဲမိဖူး၊ တွေ့ရင်တော့ သိဖို့များပါတယ်။
Kyaing Tun February 26, 2013 at 3:54 AM
ဆက်ရေးပါလို့ အားပေးပါတယ်၊ကရင်သမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို(ideal)ကရင်လူငယ်တွေအလွယ်တကူလေ့ လာသိရှိနိုင်အောင်ပါ၊စောမြင့်သူ၊သမိုင်းမေဂျာ၊ဘားအံကောလိပ်(၁၉၈၆)၊ကဆိုရင်တော့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းဖြစ်မယ်၊နောင်လုံ၊မြပေရွှာကလားမသိဘူး၊ဒီနာမည်ကကျနော်နဲ့ မစိမ်းဘူး။
Is thatatypo? You said "၁၉၃၇ နှစ်မှာ",
Burma did not get her independence
မန်းကိုကို December 28, 2010 at 12:51 AM
မမှားပါဘူးခင်ဗျ၊ ၁၉၃၇ အတွင်းမှာပါပဲ။
ဗြိတိသျှခေတ် ပါလီမန်ထဲမှာကတည်းက တရားဝင် အသိမှတ်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း ဘယ်ခေတ်မှာမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့တာမရှိပဲ ဒီကနေ့တိုင် ကရင်ပြည်နယ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ အသုံးပြု (သီဆို လွင့်ထူ) နေဆဲပါ။
S&#39; Si THu October 26, 2012 at 9:39 PM
Mahn Ko Ko, who is the one in the old photo? It it the photo of our karen king or burman or thai?
မန်းကိုကို May 25, 2013 at 8:38 PM
ဒီပုံကို Claudio Delang ဆိုသူရေးပြီး 2003 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Living at the Edge of Thai Society: The Karen in the Highlands of Northern Thailand ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကူးယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုင်းဘုရင်ကို သြဇာခံယူထားတဲ့ ကရင်မှုးမတ် သို့မဟုတ် မြို့စားနယ်စားပုံစံ ပြန်ဝတ်စားပြထားတာလို့ ယူဆရပါတယ် ။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပုံမျိုး မရသေးတာကြောင့် မတင်ပြနိုင်သေးပါဘူး ။
Anonymous May 24, 2013 at 8:49 PM
ကရင်ပုံပြင်၊ ရာဇဝင်၊ လက်ဆင့်ကမ်းစကားပုံတွေဖတ်ချင်တယ်။ဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲ။
မန်းကိုကို May 25, 2013 at 8:28 PM
မပြောတတ်ပါ ၊ အောက်က ဆရာသမားများကတော့ ကိုယ့်ထက် ပိုသိကြသူတွေပါ ။ မေးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
* ဇွဲကပင်မိသားစု - http://www.khwekabaung.org/burmese/%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB/
* ဖူ့တာမိုက် - phutarmite.blogspot.com
* ဆရာရှားလမောင် - http://www.sharlemonk.com/
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးသောဘန်နှင့် နတ်သား အမေးအဖြေ မြန်မာဘာသာပြန် (မြ...
နာမည်ကြီးကစားသမားတွေကို ကိုင်တွယ်ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူဟု ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြသစ် ပြော
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်သား (၄) ဦး မီဇိုရမ်သို့ ဆေးကုသမှုခံယူ
Curriculum amended for Standard2in upcoming academic year
さそり座A型 女性 夢占い 無料 破れる 1976年9月31日男生まれの運勢 私たちの未来占い 不倫
The Ups & Downs of Ancient Rome’s Economy–All 1,900 Years of It–Get Documented by Pollution Traces Found in Greenland’s Ice
Miley Cyrus pranked Jimmy Kimmel while he slept and it got painful
" Yum Yum" ခေါက်ဆွဲ ကြော်ငြာရိုက်နေတဲ့ အနုပညာရှင်များ
Does Your Streaming Service Have All The Shows You Want?
How to make direct donation to Fire Fighters by Myint Mon Yee
The US corporate debt market is having one of its worst starts toayear since the 1990s
Russia is out to prove that 'doomsday' forecasts of economic collapse have failed
Trying To Understand The Inimitable Culture Of Cape Verde
US and China near deal to lift ZTE ban
Meet Our Patients (40): U Aung Min’s Story – Landmine Survivor
Australia buys Spike LR2 ATGM | Saudi Patriot shoots down Houthi missile | Bulgaria set to finally replace its MiG-29 fleet
The F-35 Could Becomea'Navy' Killer
Video: Gen. David Petraeus and Ambassador Ryan Crocker on their Civ-Mil Collaboration in Iraq
US FCC Commissioner Says The Agency Is A Shill For ISPs As She Slams The Door On Her Way Out
ဒဏ္ဍာရီ -၃- ပုဒ်
Ariana Grande marks 1 year since Manchester attack
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူ ၃ ဦး အရေးယူခံရမှု ကချင်အဖွဲ့တုံ့ပြန်
호랑이 소리를 들은 진돗개의 반응 1-볼트편 Tiger Sound Dog Reaction 1-Bolt.Funny Dog Videos 재미있는 강아지 동영상
ပန်းသီး ဖုန်း တဆယ် နှင့် ပန်းသီးနာရီ စီးရီး သုံး
Canada’s Debt Spiral – OpEd